Akwadoro ọgwụ mgbochi Sputnik V COVID-19 maka ojiji mberede na Indonesia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia » Akwadoro ọgwụ mgbochi Sputnik V COVID-19 maka ojiji mberede na Indonesia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọgwụ na nri na Indonesia bụ Penny Lukito
“National Agency for Drug and Food kwadoro ọgwụ coronavirus ọzọ, Sputnik V, na Tuesday, Ọgọst 24,” nkwupụta e bipụtara taa na webụsaịtị nke National Agency for Drug and Food Control National na -agụ.
Indonesia kwadoro ọgwụ mgbochi coronavirus nke Russia mere.
Emere nyocha nke ọma nke ọgwụ ahụ.
Ruo ugbu a Indonesia edeela ikpe 4,000,000 COVID-19.
National Agency for Drug and Food Control nke Indonesia kwupụtara na Wenezde na akwadoro ọgwụ mgbochi coronavirus Sputnik V nke Russia maka ojiji mberede na mba ahụ.
“National Agency for Drug and Food kwadoro ọgwụ mgbochi coronavirus ọzọ, Sputnik V, na Tuzdee, Ọgọst 24,” nkwupụta e bipụtara taa na webụsaịtị mba ahụ. Ụlọ ọrụ National Drug and Food Control agụ.
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ Penny Lukito kwuru na emela nyocha nke ọma ọgwụ a. Ọ gbakwụnyere na arụmọrụ Sputnik V guzoro na 91.6%.
N'aka nke ya, Russian Direct Investment Fund (RDIF) kwuru na Indonesia bụ mba 70 nke kwadoro Sputnik Ise. Onu ogugu onu ogugu obodo nke nyere ikike mgbochi Russia bụ ijeri anọ, nke ruru 50% nke ndị bi n'ụwa.
Onye isi RDIF kwuru, "Indonesia bụ otu mba ndị mmadụ kacha biri na Eshia na itinye Sputnik V na Pọtụfoliyo ọgwụ mgbochi mba ga -eweta maka iji otu ọgwụ mgbochi kachasị dị nchebe na nke kachasị arụ ọrụ n'ụwa."
Indonesia edeela ihe karịrị nde coronavirus anọ, ihe karịrị ọnwụ 128,000 na ihe dị ka nde 3.6 gbakere. Ndị ọchịchị obodo ahụ kwadoro na mbụ ịgba ọgwụ mgbochi coronavirus nke Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna na Pfizer mepụtara.